U-Emily Davies, uMmeli weMfundo ePhakamileyo yabasetyhini
Ummeli weMfundo ePhakamileyo yabasetyhini
Yaziwa ngokuba: kusekwa iKholeji yaseGrton, ukuxhasa imfundo ephakamileyo yamakhosikazi
Imihla: Epreli 22, 1830 - Julayi 13, 1921
Umsebenzi: utitshala, umfazi, ummeli wamalungelo omabhinqa
Kwakhona kuthiwa nguSarah Emily Davies
U-Emily Davies wazalelwa eSouthampton, eNgilani. Uyise, uJohn Davies, wayengumfundisi kunye nonina, uMary Hopkinson, utitshala. Uyise wayengenalo i-invalid, enokukhathazeka imeko.
Ngo-Emily ebuntwaneni wayesebenza esikolweni ngaphezu komsebenzi wakhe epareni. Ekugqibeleni, washiya isikhundla sakhe sobufundisi kunye nesikolo ukugxila ekubhaliseni.
U-Emily Davies wayefundiswe ngasese-ngokuqhelekileyo kubasetyhini abaselula belo xesha. Abazalwana bakhe bathunyelwa esikolweni, kodwa u-Emily noodadewabo uJane bafundiswa ekhaya, becala kakhulu kwimisebenzi yasendlini. Wazalela abantwana bakhe ababili, uJane noHenry, ngenxa yokulwa kwabo nesifo sofuba.
Kwiminyaka engamashumi amabini, abahlobo baka-Emily Davies baquka uBarbara Bodichon no- Elizabeth Garrett , abameli bamalungelo amabhinqa. Wadibana noElizabeth Garrett ngokusebenzisa abahlobo kunye, noBarbara Leigh-Smith Bodichon ngohambo kunye noHenry ukuya e-Algiers, apho iBhodichon nayo yayichitha ubusika. Udadewabo bakaLeigh-Smith kubonakala ukuba nguye owokuqala ukumxelela iingcamango zobufazi. Ukuphazamiseka kukaDavies kumathuba akhe okufundisa angalingani kuye kwavela kwinqanaba elijoliswe kwiinkoliso ezininzi zezopolitiko zenguqu yamalungelo amabhinqa.
Abazalwana bakaEmily babulawa ngo-1858. UHenry wabulawa ngenxa yesifo sofuba esabonakalisa ubomi bakhe, noWilliam wamanxeba aqhubeka ekulweni eCrimea, nangona wayefudlulele eChina ngaphambi kokufa kwakhe. Wachitha ixesha kunye nomntakwabo uLlewellyn kunye nomfazi wakhe eLondon, apho uLlewellyn wayelungu lezinye izijikelezo ezikhuthaza ukutshintsha kwentlalo kunye nobufazi.
Waya kwiintetho zikaElizabethe Blackwell kunye nomhlobo wakhe uEmily Garrett.
Ngo-1862, xa uyise efa, u-Emily Davies waya eLondon nonina. Apho, wahlaziya i-feminist publication, I-Englishwoman's Journal , kwithuba elithile, waza wanceda wathatha umagazini waseVictoria . Upapashe iphepha malunga nabasetyhini bezonyango kwi-congress ye-Social Science Organization.
Kungekudala emva kokufudukela eLondon, u-Emily Davies waqala ukusebenza ngenxa yokungena kwamabhinqa kwimfundo ephakamileyo. Wayekhuthaza ukufumana amantombazana kwiYunivesithi yaseLondon naseOxford naseCambridge. Xa wanikezwa ithuba, wathola, kwisaziso esifutshane, abafakizicelo abangaphezu kwabasibhozo besifazane ukuba bafunde iCambridge; ezininzi zadlulayo kwaye impumelelo yomzamo kunye nokubambelela kwikhokelela ekuvuleleni iimviwo kubafazi rhoqo. Kwakhona wacela ukuba amantombazana aziswe ezikolweni eziziisekondari. Enkonzweni yaloo phulo, wayeyindoda yokuqala ukuba ibonakale njengengqina lobuchwephesha kwi-commission commission.
Kwakhona wabandakanyeka ekuhambeni kwamalungelo amabhinqa ahlukeneyo, kuquka ukukhuthaza abafazi. Uncedise ukulungelelanisa isikhalazo sika- John Stuart Mill sika-1866 ePalamente ngamalungelo amabhinqa. Ngaloo nyaka, naye wabhala iMfundo ePhakamileyo yabesifazane .
Ngowe-1869, u-Emily Davies wayeyinxalenye yeqela elavula iikholeji yabasetyhini, iKholeji yaseGrton, emva kweminyaka emininzi yokucwangcisa nokuhlela. Ngowe-1873 le nkampani yathuthela eCambridge. Kwakuyikholeji yokuqala yaseBrithani yabesifazane. Ukususela ngo-1873 ukuya ku-1875, u-Emily Davies wayekhonza njengenkosikazi yekholeji, waza wachitha iminyaka engamashumi amathathu njengoNobhala wekholeji. Le kholeji yaba yinxalenye yeYunivesithi yaseCambridge kwaye yaqala ukunika iidridi ezipheleleyo ngo-1940.
Wayeqhubeka nokusebenza kwakhe. Ngomnyaka we-1906 u-Emily Davies wabamba ukuthunyelwa ePhalamende. Wayechasene nokunyanzeliswa kwePankhursts kunye nephiko labo lokunyuka kwe-suffrage.
Ngomnyaka we-1910, u-Emily Davies wakhankanya iinjongo kwiMibandela ethile ngeeNkcubeko . Wafa ngowe-1921.
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: Omkhulu uJames James Wolfe
Isikhokelo soMqala kwixesha lePalolithic okanye iLay Age
ZoLwimi kunye neZifundo zoLuntu
Iziphakamiso eziphezulu kwiintombi eziselula